Minesweeper. 🥇 Ahoana no filalaovana mpitrandraka harena ankibon'ny tany. Emulator.online
Minesweeper. Noforonina tamin'ny sivy ambin'ny folo amby sivifolo sivy ambin'ny folo, ny Minefield dia tonga tao amin'ny Windows iraika amby telopolo tao anatin'ny roa amby sivifolo ary mbola gaga ireo mpilalao marobe ankehitriny. Ny interface-ny dia niova be nandritra ny taona maro, fa ny mekanika lalao kosa mijanona ho tsy miova. Miloka aho fa ity no tena mahaliana anao: satria tsy nitondra valiny tsara dia tsara ny zavatra niainanao teo aloha, tianao ho fantatra amin'ny antsipiriany ny fomba filalaovana Minesweeper.
Iray amin'ireo lalao efa nilalao na iza na iza, farafaharatsiny indray mandeha teo amin'ny fiainany. Nampidirina amina fampiharana Windows rehetra hatramin'ny valo izy io, rehefa nanapa-kevitra ny hanafoana azy io koa i Microsoft manirery ary ireo fialamboly hafa izay efa napetraka mialoha ao amin'ny rafitra fiasanao nandritra ny taona maro. Misy koa miantso azy io minefieldRaha ny marina, ity dia fiovan'ny lalao (mety kokoa amin'ny lafiny politika) nampidirina niaraka tamin'ny Windows XNUMX izay nanasongadina bebe kokoa na quirks mitovy ihany.
Raha ny marina, amin'ity lesona anio ity dia hanazava ny fomba ahazoana sy ny fomba filalaovana an'i Minefield aho amin'ny firesahana momba ny kinova farany an'ny Minefield maimaimpoana ao amin'ny magazay Windows XNUMX, izay azo ifandraisana ihany koa. ary afaka mifandray amin'ny Xbox Live ianao hizarana ny fandrosoanao. Andramo izany ary manome toky anao aho fa tsy hanenenanao izany! Raha tsy tena afa-po ianao dia tsy hijanona hampahafantatra anao ny safidy hafa mety ho an'ny PC, smartphone ary tablette. Mamaky am-pifaliana ary ambonin'izany rehetra izany dia mankafiza!
Mpitrandraka harena ankibon'ny tany | Mpitrandraka harena ankibon'ny tany an-tserasera
Ao amin'ny kinova farany navoakan'ny Microsoft dia misy maody 2 misy: izany kilasika, izay mamerina am-pahatokiana ireo mampiavaka an'i Prato fiorito, ary izay Aventura izay, etsy an-danin'izany, dia manolotra toetra hafahafa vaovao. Andao atomboka amin'ny voalohany, noho izany dia vakianao ity torolàlana ity.
En Fomba nentim-paharazana minefield misy tadin'ny boaty rakotra, izay maneho ny faritra ahafahan'ny toeram-pitrandrahana miafina: raha te handresy ianao dia tsy maintsy mamafa ny efamira foana ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Amin'ity kinova ity, raha tokony ho ny toeram-pitrandrahana dia hahita ladybugs ianao, fa tsy miova ny fandidiana. Ankoatra ny famafana ireo efamira amin'ny tsindry (na paompy) dia azonao atao ny manisy marika ireo izay heverinao fa manafina fitrandrahana ary manakana azy ireo, mba tsy hanapoaka azy ireo.
Azonao atao ny mametaka iray saina mena ao anatin'ireto boaty ireto miaraka amin'ny tsindry havanan'ny totozy na fikasika lava: avereno ity hetsika ity, fa tsy ny sainam-pirenena, a mari-panontaniana mavo izay "hamaha" ny taila voafantina ary hamela anao hanafaka azy ireo. Mba handresena dia tsy maintsy esorinao ny kianja tsirairay izay tsy misy toeram-pitrandrahana, tsy manapoaka toeram-pitrandrahana tokana.
Misy ambaratonga sarotra 3 azo isafidianana: mpanao voalohany, intermediate y Advanced. Mba hanavahana azy ireo dia ny isan'ny kianja sy ny toeram-pitrandrahana ao anaty vongan-tany: efamira sivy × sivy misy toeram-pitrandrahana folo amin'ny voalohany, enina ambin'ny folo × enina ambin'ny folo miaraka amin'ny efapolo ao amin'ny faharoa ary sivy ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo sivy ambin'ny folo amin'ny fahatelo. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hilalao ambaratonga grids manokana, aiza no hisafidianana boaty firy ao altura, sakany ary ny isan'ireo toeram-pitrandrahana na Coccinelle. Ny maimaim-poana valo × valo voalohany dia tsy afaka intsony.
Ny ankamaroan'ny boaty maimaim-poana dia poakaty, fa ny sasany kosa manana isa 1 ka hatramin'ny 6: famantarana sarobidy izy ireo, satria manondro ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any amin'io faritra io. Aleo hamafana ireo boaty eo akaikin'ireo izay tsy misy isa ao anatiny ary mariho ho "mampidi-doza" ireo izay mifanila amin'ny dimy na enina. Ho fanampin'izany, tsy maintsy miantehitra amin'ny harinao ianao, satria tsy misy toro-hevitra na hafetsena hafa handresena an'i Minefield. Lalao piozila tena tsara io!
fomba Aventura Zava-baovao mahaliana izy ity ary azo jerena ho lalao hafa mihitsy, na dia mitazona ny mampiavaka azy manokana aza ny mpitrandraka harena ankibon'ny tany. Eto, ny mpitrandraka iray dia mitana ny andraikiny amin'ny alàlan'ny andian-torolàlana mifangaro (izay maneho ny haavon'ny haavony), mitrandraka ireo boaty eny an-dalana. Fa tsy ny toeram-pitrandrahana, miafina ireo vela-pandrika: manomboka amin'ny fiainana 3 ianao ary afaka mahazo bebe kokoa amin'ny fanangonana fo. Ny vola madinika dia mampitombo ny isa.
Ny fomba fitsangatsanganana dia tsy "mahasosotra" kokoa noho ny mahazatra, noho ny zava-misy fa raha mahita fandrika ianao dia mbola manana safidy 2 hafa hamenoana ny haavony. Ny fisian'ireo vola madinika sy zavatra fanangonana hafa hamaha ireo varavarana misavoana (mitohy ao amin'nyAventura) mahatonga ny traikefa amin'ny lalao handresy lahatra kokoa: ny boaty hisokatra amin'ny fotoana rehetra dia mety misy isa fanondroana ireo fandrika eo akaiky eo ary ny mekanika dia mitovy amin'ny voalaza teo aloha ihany.
Ho fanampin'ny vola madinika dia afaka manangona ny mpitrandraka bulliona volamena y Armas mamono ny mpanohitra ary manimba fandrika amin'ny lalanao: ny tsirairay amin'ireo fihetsika ireo dia manampy amin'ny fampitomboana ny isa amin'ny lalao. Tsy misy sainam-pirenena na mari-panontaniana, fa misy kosa ny marika mena sy fotsy misy a fanamarihana, izay mitovy tanjona mitovy ary ampandehanana amin'ny tsindry havanana na fikasihana lava.
Tsy nifarana teto ilay vaovao, satria i Minefield koa dia manome toky olana isan'andro Miorina amin'ny maody tonga lafatra nentim-paharazana izy ireo ary mamela anao hianika lohalaharana isam-bolana ho an'ny bonus izay azo laniana amin'ny lalao. Ireo fanamby isan'andro dia azo alaina ao amin'ny pejy lehibe amin'ny lalao ary aroso mba hamenoana hetsika samihafa: mba ho ohatra iray, amin'ny fanamby iray dia mety mila manisy marika ny vanja folo ianao miaraka amin'ny sainam-pirenena (tsy mamoaka boaty) ary amin'ny iray hafa manitsaka ilay toeram-pitrandrahana.
Ny fanamby dia manome ampinga 4 varahina, volafotsy, volamena ary diamondra XNUMX, arakaraka ny fivoaran'ny isam-bolana. Ny haavon'ny fahasarotana dia taratry ny maody mahazatra - afaka mandresy fanamby ianao amin'ny maha-vao manomboka, intermediate na hafa manam-pahaizana.
Ho fanampin'ny loka tsy manam-paharoa, izay miresaka voalohany indrindra amin'ny kinova premium an'ny lalao (izay horesahiko vetivety), ny tanjona dia ny hahatratra tanjona Xbox Live
Eny, mamaky izany ianao! Minefield dia tsy azo lalaovina ao amin'ny consoles Microsoft, fa afaka mahazo isa amin'ny kaonty Xbox Live ianao! Ankehitriny, na izany aza, ampy resaka: tonga ny fotoana hahatakarana ny fomba fametrahana Minesweeper amin'ny solosainao.
Solony hafa amin'ny mpitrandraka harena ankibon'ny tany
Ankehitriny dia hamaritako ny azo antoka Solony hafa amin'ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany misafidy raha tsy afa-po amin'ny Microsoft Minesweeper ianao.
Mpitrandraka harena ankibon'ny tany: ny zavatra ilaina (Windows XNUMX)
Ny safidy safidy voalohany arosoko dia Minefield: ny tena ilaina, programa maimaim-poana izay mety ho hitanao ao amin'ny magazay Windows XNUMX ofisialy ary azonao apetraka amin'ny fipihana ny bokotra mahazo. Tsy misy fividianana fanampiny na doka mandritra ny lalao. Na izany aza, tsy hita ny maody Adventure. Io ilay ahitra voninkazo nentim-paharazana miaraka amin'ny ambaratongan'ny fahasarotana 3 efa voafaritra ary iray no mifanaraka.
Ny refin'ny grids sy ny isan'ireo toeram-pitrandrahana isan'ambaratonga dia mahazatra, noho izany, mitovy amin'ny an'ny Minefield an'i Microsoft. Ny fanamboarana ny takelaka dia manome soatoavina mitovy ihany: miova ny anarana, noho ny zava-misy eto dia afaka mifidy eo anelanelan'ny maody ianao mora, haino aman-jery na hafa sarotra. in safidy Hahita lohahevitra 3 ianao hanamboarana ireo sary momba ny lalao sy fifehezana sasany mifandraika amin'ny famantaranandro, ny feo ary ny mari-panontaniana matetika. Tena ilaina tokoa izany raha ny fampanantenan'ny lohateny.
Ity toeram-pitrandrahana ity dia manolotra rafitra antontan'isa amin'ny isa azo tamin'ny lalao, fa tsy afaka mifandray amin'i Xbox Live hizara azy ireo amin'ny namanao ianao: raha te hilalao Prato Fiorito fotsiny ianao dia heveriko fa tsy olana izany. Mikasika ny mekanika lalao, ny hetsika dia mitovy amin'ny an'ny Microsoft lalao: tsindrio na kitika hamotsorana ireo boaty, kitika havanana na fikasihana lava hanamarihana azy ireo. Tsotra, tsy toy izao? Ny sary dia tsara tarehy ihany koa.
Minesweeper! (Windows folo)
Ny safidy faharoa atolotray anao, Minesweeper!Izy io dia mety amin'ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny sary dia tsy tena tsara indrindra, fa ny lalao kosa mamerina ny mampiavaka ny tany am-boalohany ho an'ny Windows: hatrany sy amin'ny toe-javatra rehetra dia afaka mahita izany ao amin'ny Microsoft Store ianao.
Misy grid 4 (foana sy amin'ny toe-javatra rehetra mizara ny haavon'ny pitsiny), izany hoe mora, Medio, sarotra y nofy ratsy. Eto dia tsy misy azo atao ampanjifaina ny refy ary ny isan'ny boaty havoaka dia tena tsy mitovy amin'ny fenitra.
Amin'ny maody tonga lafatra Tsotra, ny takelaka dia efamira valo × sivy misy toeram-pitrandrahana folo; eo afovoan'ny 10x12 miaraka amina toeram-pitrandrahana roapolo; amin'ny sarotra roa ambin'ny folo × efatra ambin'ny folo miaraka amin'ny toeram-pitrandrahana telopolo ary ao amin'ny Nightmare XNUMX ambin'ny folo × XNUMX miaraka amin'ny toeram-pitrandrahana efapolo. Ny mekanikan'ny lalao dia fanabeazana fototra: ny tsindry na ny mikasika rehetra dia mamoaka ilay boaty mifandraika, nefa tsy afaka manamarika ireo ahiahiana. Adika amin'ny fiteny italianina ny lalao, fa amin'ny Fikirana Azonao atao koa ny manova ny fiteny na ny ao ambadiky ny fikandrana: raha te hiditra ianao dia tsindrio fotsiny ilay sary masina efitra izay eo afovoany ambany.
Mpitrandraka harena ankibon'ny tany (macOS)
Raha mampiasa Mac ianao dia afaka milalao ny Minefield amin'ny fametrahana ny fampiharana maimaim-poana mitovy anarana avy amin'ny Mac App Store, izay azonao apetraka amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Mahazo / hametraka, miorina amin'ny tapany ankavanana ambony ary manamarina ny tenany, raha ilaina, amin'ny alàlan'ny tenimiafina ny Apple ID anao na ID ny famandrihana (raha manana sensor momba ny dian-tànana ny Mac-nao).
Ny lalao dia mitovy tanteraka amin'ny toeram-pitrandrahana nentim-paharazana, miaraka amin'ny lamina folo × roa ambin'ny folo sy roa-polo mina. Mba hanitsiana ny toerana misy ny lalao dia tsy maintsy tsindrio ilay kisary efitra miorina eo afovoany ambany ary safidio ny antony Fikirana avy amin'ny menio misokatra.
Ahoana no hilalao Minesweeper Online
Milalao Minesweeper amin'ny alàlan'ny fametrahana programa amin'ny solosainao dia tsotra be, saingy mety tsy hahatsapa ianao hoe handray toerana disk ho an'io lalao io. Ka maninona raha milalao mivantana amin'ny Internet? Ao amin'ny tranonkala dia misy tranokala marobe mamela anao hanao izany: ny iray amin'izy ireo dia Mpitrandraka harena ankibon'ny tany an-tserasera izay manana kinova mandoa ihany koa ao amin'ny App Store. Ampiakariko aminao ity raha manana sary mitovy sy fanaraha-maso mitovy amin'ny toeram-pitrandrahana voalohany ho an'ny Windows izy.
Amin'ny teny anglisy ny toerana, saingy tsy mila mahafantatra ny fiteny hilalao ianao. Ny grids dia manana refy mahazatra an'ny Microsoft Minesweeper: amin'ny fipihana lalao, hita eo ankavanan'ny havia, afaka misafidy ianao mpanao voalohany, intermediate y manam-pahaizana, izay mifanitsy amin'ny Beginner, Intermière ary Specialist. fanao dia ho an'ny maodely mifanaraka tanteraka, izay azonao apetraka altura (Haavo) sakany (Sakany) ary koa toeram-pitrandrahana (Mine). Fanamarihana a marika ao amin'ny tranokalanao, avelao ny marika.
Hitan'ny mekanika lalao ny tsindrio havia mba hamoahana ireo kianja sy ny zony hanamarihana azy ireo: kitiho eo fanaraha-maso jereo ny famintinana ny hitsin-dàlan'ny keyboard sy ny fihetsikao. Mahaliana ny safidy miseho izay mamela anao hanakaiky na hanalavitra ny takelaka amin'ny zato isan-jato ka hatramin'ny roanjato isan-jato.
Mode mode kosa, ovao ny fiavian'ilay toerana ary ahenao ny famirapiratry ny varavarankely hahafahana mamonjy angovo mandritra ny alina.
Nohazavaiko ny fomba filalaovana ny Minefield amin'ny solosaina sy amin'ny Internet, fa raha tianao ny hanao izany avy smart phone na hafa takelaka? Aza manahy: misy fampiharana maimaim-poana maro izay mamela anao hilalao amin'ny Android sy iOS koa. Ny sasany manana bara fanavaozana!
Mpitrandraka harena ankibon'ny tany: Mpanangona (Android / iOS): Ny fiovaovan'ny toeram-pitrandrahana nentim-paharazana izay, ankoatry ny fananana kofehy hafa ankoatry ny kianja na ny mahitsizoro, dia misy ny ambaratonga sy angonina.
Globesweeper (Android / iOS) - reraky ny bara roa refy? Miaraka amin'ity rindranasa ity dia afaka milalao sehatra sy cubes ianao. Fiovan'ny Minefield tanteraka ho an'ny fitsapana.
Tontolon'ny toeram-pitrandrahana (Android / iOS) - ahodino ireo toeram-pitrandrahana ao amin'ny sari-tanin'ny firenena eto an-tany miaraka amin'ity karazana minefield ity izay manasa anao hamerina hijery ny jeografia.
Ahoana ny fametrahana Minefield amin'ny Windows 10
Nianatra nilalao aho, tonga ny fotoana hanazavana Ahoana ny fametrahana Minefield amin'ny Windows 10. Maimaimpoana ny lalao ao amin'ny magazay rafitra miasa Microsoft, ka ny sisa ataonao dia ny manindry ny bokotra manga misy soratra mahazo ao amin'ny pejy ofisialin'ny Microsoft Minesweeper.
Ny fampiharana, araka ny efa voalaza, dia maimaim-poana, saingy misy atiny misy karama fanampiny izay azo vohana aorian'ny fametrahana azy: azonao atao ny misoratra anarana amin'ny famandrihana premium mandritra ny iray volana amin'ny sivy amby efapolo amby zato euro na mandritra ny iray taona amin'ny sivy.89 euro. Mampalahelo fa misy sora-baventy ny lalao ary manery anao tsindraindray hijery horonantsary fampiroboroboana segondra vitsy izay tsy azonao esorina. Ny vahaolana tokana tokony hialanao dia ny fisoratana anarana. Ny tombony azo amin'ny famandrihana hafa dia ny vola madinika mpanampy (izay natao ho an'ny fanamby) ary entana manokana ho an'ny maody Adventure izay tonga lafatra.
Rehefa nilaza izany isika dia andao handray andraikitra! Download dia vita, manomboka Microsoft Minesweeper amin'ny alàlan'ny kisary ao amin'ny menio Start ary manomboka lalao ao amin'ny Mode mahazatra na ao amin'ny Fomba fitsangatsanganana, avy eo tsindrio ny boaty mifandraika amin'ny haavon'ny pitsiny tadiavina: mpanao voalohany, intermediate na hafa manam-pahaizana.
Ny varavarankely lehibe an'ny Minefield, izay azo hitarina amin'ny efijery feno amin'ny alàlan'ny kisary miaraka amin'ny zana-tsipìka 2 eo ankavanana ambony, horonana mitsivalana: amin'ny alàlan'ny fanodinana azy miankavia, dia afaka mahita statistika amin'ny lalao sy tanjona Xbox Live tratra ianao Afaka mihetsika ianao fifandraisana amin'ny kinova fandoavam-bola ihany no ilaina: ao amin'ny kinova fototra dia misy ny default ihany no miseho.
Na izany aza, raha te hiditra amin'ny sehatry ny toeram-pitrandrahana dia tsy maintsy tsindrio ny kisary hita eo ankavanan'ny havia ary safidio ny antony Fikirana avy amin'ny menio atolotra anao: ity dia hanokatra takelaka ilany ahafahanao manitsy ny safidy lalao.
Azonao atao ny manitsy ny habetsahana ary mampihetsika na mampiato ny fampitandremana, raha afaka mifidy avy hatrany ianao raha te hampiasa i na tsia fanontaniana marika. Raha avelanao ny solosainao, azonao atao koa ny manamboatra mikasika ary ny sary ary azonao atao ny mampihetsika ny fanovana ny maody haingana sy / na ny baiko famindran-toerana. Ary farany, afaka misafidy ny hamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra fanovana default na hafa mamerina statistika amin'ny lalao.
Lafiny farany iray izay tiako hojerena. Xbox Live- Raha efa nisoratra anarana profil ianao noho ny fanananao console Xbox dia tsy mila manao na inona na inona ianao ary rehefa tonga ny farany dia hampandrenesina anao eo amin'ny birao. Raha mbola tsy manana kaonty ianao dia tsy manoro hevitra anao aho hanoratra izany satria tsy hahazo valisoa.
Ahoana ny fampiasana App IO amin'ny fandoavam-bola, famerenam-bola ary fifandraisana